Kuthungathwa izihlobo zomfanyana - Ilanga News
Home Izindaba Kuthungathwa izihlobo zomfanyana
Kuthungathwa izihlobo zomfanyana
Utholwe esele dengwane erenki yamatekisi
YIngane etholwe ishiywe dengwane erenki yamatekisi aseNanda, ehostela laKwaMashu. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
ISAGCINWE ndawana thile ingane yomfana elinganiselwa ezinyangeni eziwu-12 ubudala, etholwe ishiywe dengwane ematafuleni okudayiselwa kuwona erenki yaseNanda, ehostela laKwaMashu ngoLwesithathu ebusuku, okumanje kuthungathwa izihlobo zayo.
Le ngane kuthiwa itholwe ngabazalwane abebephuma enkonzweni, abayifice ihleli nje izithulele, iqhuqhwa ngamakhaza. UNkz Ntombenhle Shabalala ongomunye wabazalwane, uthi kubamangazile ukubekwa kwale ngane kule ndawo.
“Kunowesilisa esikhonza naye ophume kuqala enkonzweni ngabo-9 ebusuku ngoba ejahe ukuyolala kwazise ubephuma emsebenzini. Emuva kwemizuzwana nje ehambile, ubuye esephethe ingane ebeyingambethe lutho.
“Uchazile kumfundisi ukuthi ingane uyifice ihleli ematafuleni okudayiselwa kuwona wama ezitshela ukuthi mhlawumbe kukhona ozoqhamuka ayithathe, kodwa lutho,” kusho yena.
Uthi bavumelane ngokuthi makuyiwe esiteshini samaphoyisa kwa-E, KwaMashu bayobika ngengane etholakele.
“Amaphoyisa acele ukuba siyigcine ngoba ibisizingcolisile futhi beyingenazo nezimpahla zokugqoka, ingenakho nokudla.
“Ngoba nginengane encane, ngiyithathile ngafika endlini ngayigeza, ngayinika ibhodlela yancela, yalala ngaphandle kokuhlupha.
“Siphume inqina khona ebusuku ngemuva kokuboleka imibhobho, simemezela ehostela lapho sihlala khona ukuthi mabaphume abesifazane bazobheka ukuthi kabayazi yini ingane, kodwa sabona ukuthi cishe akuyona eyasendaweni ngoba akekho obeyazi,” kusho uNkz Shabalala.
Uthi baqhubekile nangoLwesine behamba, bekhombisa ngesithombe sengane kodwa lutho umuntu oyaziyo.
“Sigcine sesixhumana nekhansela lethu ukuba lilekelele lasixhumanisa nosonhlalakahle abagcine beyithathile ingane ngoLwesihlanu ebusuku,” kusho yena.
Uthi akuqaphelile ngale ngane wukuthi kubukeka sengathi ibiphethwe kahle ngoba beyigqoke izingubo ezihlanzekile futhi nayo yondlekile.
Ngemuva kokuhlala nayo izinsuku ezimbili, uNkz Shabalala uthi kumphathe kabi ukuyibona seyihamba iyobekwa lapho ingazi muntu khona.
“Ngizocela nje kosonhlalakahle ukuthi ngilokhu ngiya ukuyoyibheka ngoba ibisingijwayele, bengithi noma ngiphuma ingikhalele, kanti nangesikhathi isithathwa, ikhihle isililo kwangathi iyabona ukuthi isiyahanjiswa futhi iyiswa lapho nayo ingazi khona,” kusho yena.
UMnu Mzwethu Sandile Gwala oyikhansela ku-ward 39, uthi kudingeke ukuba axhumane nosomabhizinisi abathile ukuze ingane igcine ithengelwa ukudla.
Uthi bazame konke okusemandleni ukuba kutholakale unina wengane noma izihlobo zayo.
“Sixhumane nabemisakazo ukuthi basilekelele bamemezele ngale ngane, sanxusa nabasezinkundleni zokuxhumana ukuba bafake isithombe sayo, kodwa kawukho umkhondo esisawutholile,” kusho yena.
Umthombo waleli phephandaba ukuqinisekisile ukuthi njengamanje ingane igcinwe ngosonhlalakahle ndawana thile ePinetown ngesikhathi kusafunwa umndeni wayo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kalikho icala elivuliwe esiteshini saKwaMashu.
Previous articleI-Downs iqashe umngqithi nomokwena kwesokuqeqesha
Next articleBanxenxa umengameli ukuba avumele imicimbi